Francesco Totti oo kulankii ugu dambeeyay u saftay Roma - BBC Somali
Francesco Totti oo kulankii ugu dambeeyay u saftay Roma
Image caption Francesco Totti ayaa ilmeynayay markii uu taageerayaasha u akhrinayay warqaddiisa sagootinta
Ciyaaryahanka weyn ee Francesco Totti ayaa ilmeeyay kaddib markii uu hadal ka jeediyay ciyaartii ugu dambaysay ee uu kooxdiisa Roma u dheelay kaddib 25 sano oo uu kooxdaasi u ciyaarayay.
40-jirkan weerarka ka dheela ayaa naadiga kaliya ee uu u dheelay ee Roma waxa uu u dhaliyay 307 gool 786 kulan oo uu u saftay.
Ciyaarta ayuu badel ku soo galay daqiiqaddii 54-aad, iyadoo ciyaartuna ay kooxdiisa 3-2 uga badisay kooxda Genoa ee martida u aheyd.
Guusha Roma ay gaartay daqiiqaddii ugu dambaysay ee ciyaarta ayaa waxa ay u sahashay inay toos uga qeyb qaadato Koobka Horyaalada Yurub ee xagaaga soo socda.
Ciyaarta kaddib ayuu Totti waxa uu taageerayaasha u akhriyay warqad hadalladii ku qornaa ay ka mid ahaayeen: "Waan cabsanayaa. Ma saadaalin karo sida mustaqbalku uu noqonayo."
Image caption Francesco Totti ayaa ilmeeyay ciyaarta kaddib xilli la gudoonsiinayay sawir uu ku qoran yahay nambarka 10 iyo magaciisa iyadoo taageerayaashana ay kor u hayeen warqado ay ku qoran yihiin namberkiisa caanka ah
Kabtan Totti ayaa la gudoonsiiyay sawir uu ku qoran yahay nambarka 10 iyo magaciisa, kaas oo ah nambarka aadka loogu yaqaan, iyadoo ay garab taagan yihiin xaskiisa iyo carruurtiisa.
Waxaa la filayay inuu agaasime u noqon doono kooxda Roma hasayeeshee bayaan uu soo saaray todobaadkan ayaa sheegayay inay suuragal tahay inuu meel kale ka dheelo.
Image caption Ciyaarta kaddib Francesco Totti ayaa waxaa kor u tuurayay ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin
Ciyaarta ayaa waxaa hareeyay hadalheynta maalinta Totti, hasayeeshee tababare Luciano Spalletti oo xilli ciyaareedkan kursiga keydka ku hayay xiddigan ayaa sheegay in natiijada ay ka muhiimsaneyd in ciyaarta lagu bilaabo Totti.
Kooxda Genoa ayaa ciyaarta ka hor waxa ay Totti gudoonsiisay fanaanad gaar ah oo magaciisa lagu qoray taas oo u muuqan kartay dadkii ku sugnaa garoonka Stadio Olimpico.
Image caption Calankan Robocap ayaa waxaa loogu dabaaldegayaa ninka kooxda Roma kabtanka u ahaa 18 sano.
Jawiga garoonka ayaa mar qura sare u kacay kaddib markii Totti loo badelay Maxamed Saalax sagaal daqiiqo un markii ay socotay qeybta labaad ee ciyaarta.
Bilowgii xilli ciyaareedkan, agaasimaha guud ee kooxda kubadda cagta ee Roma Monchi ayaa sheegay in Totti uu ciyaaraha ka fariisanayo dhammaanka xilli ciyaareedka agaasimana uu noqonayo.
Image caption Amore Infinito - jaceyl aan dhammaanayn - ayaa ku qoran calan kale oo ay wateen taageerayaasha Roma
Bayaan uu Totti soo saaray Khamiistii ayuu ku sheegay in ay noqonayso "Markii ugu dambaysay ee uu xiran karo fanaanadda Roma". Waxa uu intaa ku daray: "Laga bilaabo Isniinta waan tegi karaa. Waxaan diyaar u ah howl cusub."
Tababare Spalleti oo haatan la filayo inuu kooxda isaga tago ayaa si joogta ah xilli ciyaareedkan Totti goor dambe usoo gelin jiray ciyaarta waxa uuna si joogta ah uga caban jiray su'aalaha laga waydiiyo waqtiga uu dheelsiinayo ciyaaryahankan weerrarka ka dheela.
Ciyaartii Axadda ayaa aheyd middii ugu horreysay ee uu Totti dheelay in ka badan 30 daqiiqo ciyaar ka tirsan horyaalka Talyaaniga ee Serie A tan iyo bishii September.